प्रदेश ५ « News of Nepal
सलिम अन्सारी, प्युठान । जिल्लाको दुर्गम गौमुखी गाउँपालिकामा खरले छाएका विपन्न परिवारका घर जस्तापाताले छाउन थालिएको छ । खरको झुपडीमा जीवन गुजारीरहेका परिवारलाई गाउपालिका च सुरक्षित छानोमुनी ल्याउने काम सुरु
धनवीर दाहाल, रुकुम । मार्सी धानको चामल र सिमी बोकेर जुम्लाका व्यापारी रुकुम पुगेका छन् । जुम्लाकै स्थानीय व्यापारी मार्सी धानको चामल र स्थानीय सिमी बोकेर मुसीकोट नगरपालिका पुगेका हुन्
गुल्मीको रेसुङ्गामा पैदल मार्गका लागि आधुनिक सिडी बनाइदै
अनिल खत्री, गुल्मी । गुल्मीको ऐतिहासिक,धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थल रेसुङ्गामा आध्निक खालको पैदल मार्गको लागि सिढि निर्माण हुने भएको छ । गत वर्ष गुल्मीमा सम्पन्न तेस्रो गुल्मी महोत्सवबाट संकलित रकमबाट
कान्छो जिल्ला रुकुम पुर्वमा दुई सरकारी कार्यालय स्थापना
धनवीर दाहाल, रुकुम पुर्व । नेपालको कान्छो जिल्लाको रुपमा मान्यता पाएको रुकुम पुर्वमा सरकारी कार्यालयहरु स्थापना हुने क्रममा शुक्रबार मात्र दुई सरकारी कार्यालय स्थापना भएका छन् । प्रदेश नं ५
धनवीर दाहाल, रुकुम । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका स्थित सोलाबाङमा नेपाल टेलिकमले सेवा बिस्तार गरेको छ । रुकुमकै मुख्य व्यापारिक केन्द्र सोलाबाङ सदरमुकाम नजिकै भएर पनि हालै मात्र सो सेवा
महेश न्यौपाने, रोल्पा । नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा रोल्पाको अध्यक्षमा लोकेन्द्र चन्द चयन भएका छन । नेपाल प्रेस यूनियन जिल्ला शाखा रोल्पाको चौथो जिल्ला अधिवेशनवाट चन्द अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित
धनवीर दाहाल, रुकुम । गरे असम्भ के छ र ? धन कमाउनका लागी हरेक दिन बिदेशिने युवाहरुलाई चुनौती दिँदै रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका –११ सिमबजारमा पाँच जना युवाहरुको लगानीमा साबुन
अनिल खत्री, गुल्मी । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले सडकमै चालक, सहचालक र यात्रुहरुलाई प्रर्शिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रहरीले दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न भन्दै प्रहरीले सडकमै चालक, सहचालक र यात्रुहरुलाई
भत्कीएको सडक मर्मतमा कस्सीयो शसस्त्र प्रहरी
धनवीर दाहाल, रुकुम । रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम रहेको मुसिकोट नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे गरिएको सडक भत्कीएर जिर्ण बन्दै गएपछि यातायात संचालनमा कठिनाई भएको छ । सल्ले देखी खलंगा बजार
नेपालमै पहिलो पटक मौरीको बिमा
मौरिपालनमा जोखिम घट्दै सलिम अन्सारी, प्यूठान । मुलुकमै पहिलो पटक प्यूठान जिल्लाका किसानले मौरीको बिमा सुरु गरेका छन् । नेपाल सरकारले आइ एम इ जनरल इन्सोरेन्स कम्पनी लि. को सहकार्यमा मौरीको
स्वास्थ्य चौकी भवन हस्तान्तरण
नेपाल समाचारपत्र, पाल्पा । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पाल्पाले करिव २ करोड लागतमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गरी सम्वन्धित कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यालयले माथागढी गाउँपालिका
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम रुकुममा पनि सुरु
धनवीर दाहाल, रुकुम । हर प्रहर गाँउ नगरी, टोलटोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने मुल नारा सहित नेपाल प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आइतबारदेखी सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम
सरिता चलाउने, सल्यान जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रुपमा स्थापित भएको छ कुपिण्डे ताल। तर, ताल आसपासमा होटल र अन्य पूर्वाधार नहुँदा त्यहाँ पुग्ने पर्यटक चाहेर पनि बसाई लम्ब्याउन सक्दैनन्। सामान्य खाना
धनवीर दाहाल, रुकुम । रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट तथा मुख्य बजारमा नियमित अनुगमण र निगरानीमा कडाई गरिएको छ । दशैं तिहार नजिकिए संगै बजारमा हुन सक्ने सम्भावित कालो बजारीलाई रोक्न
प्रदेश ५ मा सार्वजनिक सवारी चालकलाई अनिवार्य पोशाक
यमलाल भुसाल, बुटवल । बढदो सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि प्रदेश ५ का मुख्य राजमार्गदेखि विभिन्न स्थानीय रूटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका चालकहरूलाई अनिवार्य पोशाक लगाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रदेश ५ को १५ विधेयकको लागि अवधारणा पत्र स्वीकृत
यमलाल भुसाल, बुटवल । प्रदेश नम्वर ५ को मन्त्री परिषदको आईतवार बसेको बैठकले १५ वटा विधेयकको लागि अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले ऐन,
नेपाल समाचारपत्र, गुल्मी । गुल्मीमा महिलाहरु भन्दा पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता गरेका छन् । नयाँ मुलुकि संहिता लागु भएदेखि महिलाहरु भन्दा पुरुषले श्रीमतीबाट सम्बन्ध बिच्छेद गर्न भन्दै अदलतमा मुद्धा